अर्थ-वाणिज्य मुख्य समाचार
मे 29, 2019 मे 30, 2019 साइन्स इन्फोटेक	6 Comments डा. युवराज खतिवडा, बजेट
जेठ १५, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बुधबार बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख र पूँजीगततर्फ चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख निर्धारण गरिएको बताउनु भयो । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटले बृद्धभत्ता बृद्धिदेखि कर्मचारीको तलब समेत बृद्धि गरेको छ । सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेट वितरण भएको देखिएको छ । यस्तै आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित खर्चको स्रोतका लागि राजश्वबाट ९ अर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ३३ लाख प्राप्त गरिँदा पनि बजेटमा ४ अर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख कम हुनेछ ।
यस्तो छ आ.व. २०७६/७७ बजेटको पूर्णपाठ
← मानिसले किन बहु-विवाह गर्छन् ?
यस्तो छ विज्ञान तथा प्रविधिको विकासको लागि आ.व. २०७६/७७ को बजेटमा →
6 thoughts on “आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट (पूर्णपाठ)”